Ihe 5 kacha mkpa Onyeisiala Buhari kwuru n'ụtụtụ a - BBC News Ìgbò
Ihe 5 kacha mkpa Onyeisiala Buhari kwuru n'ụtụtụ a
Nkenke aha onyonyo Onyeisiala Muhammadu Buhari kwuru na ọchịchị ya bịara oge ndị Naịjirịa chọrọ ka ihe gbanwee, na ọ na-eweta mgbanwe a
Iji mee ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa, Onyeisiala Muhammadu Buhari mere nkwuputa iji kọwaa ọnọdụ ọtụtụ ihe gbasara ọchịchị ya na Naịjirịa.
Ka ọchịchị onye kwuo uche ya bidoro n'ụbọchị Mee 29 n'afọ iri na itoolu gara aga (Mee 29 1999), Naịjirịa na-eme emume a kwa afọ iji cheta ụbọchị ndị agha nyefere ndị nkịtị ọchịchị.
Nke afọ a bụkwa ụbọchị ncheta afọ atọ Buhari banyere ọchịchị dịka Onyeisiala Naịjirịa.
Ka Buhari bidoro ime nkwuputa ya, o kwuru na kamgbe o jiri banye ọchịchị, na ha ahụla ọgbatughie karịrị akarị, mana obi ụtọ ya bụ na ndị Naịjirịa kwadoro ya imepụta nkwa atọ kacha mkpa o kwere oge o batara.
O kwuru na ha na-agba mbọ imezu mkpa ndị ahụ bụ nchekwa, ịkwụsị mpụ na nrụrụaka nakwa ikwalite akụnaụba obodo.
Ihe ise kacha mkpa Buhari kwuru taa
N'ime ihe na-akarịghị nkeji iri atọ, Buhari kelere ndị Naịjirịa maka ikwado ọchịchị ya ma kwukwaa na nchekwa ka so n'ihe ndị kacha mkpa n'ọchịchị ya.
Lee ihe ndị ọzọ o kwuru na ihe ndị mmadụ na-ekwu maka ya ebe a.
Nchekwa: Buhari kwuru na tupu ọ bata ọchịchị afọ atọ gara aga, na ndị Boko Haram kpachikọrọ ọtụtụ ala ndị dị na mpaghara ugwu-ọwụwa anyanwụ. Mana "ugbua anyị ebusola ndị omekome ahụ agha mere ka ikike wegharịa aka lọghachị n'aka ndị ọchịchị, nakwa ịtọghapụ ndị Boko Haram ji eji gụnyere ụmụakwụkwọ Chibok 106 na ndị Dapchi 104 na ndị ọzọ ruru puku iri na isii.
Ịza okwu a Buhari kwuru, otu onye kwuru na Twitter na e kwesịghị ime ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya maka na ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla.
Image Copyright @KnoxTainment @KnoxTainment
Image Copyright @waleolaN @waleolaN
Ịkwụsị mmerụaka: O kwuru na n'ime afọ atọ ọ nọrọla n'ọchịchị, na ndị Naịjirịa na ndị mba ofesi na-aja ya ike maka mkpebi ya ikpochapụ mpụ na nrụrụaka. O kwuru na ọchịchị ya anapụtala naịra ijeri narị abụọ (N200billion) site n'ịkwụsị ego a na-akwụ ndị na-anara ụgwọ ọnwa n'agbanyeghị na ha anaghị abịa ọrụ nke bekee kpọrọ 'ghost workers'. O kwukwara na e nwetala naịra ijeri narị ise (N500billion) bụ ego si na ndị a gbara ama maka ha nke bekee kpọrọ 'whistle blowing'.
Ịza ihe Buharị kwuru, otu onye 'lere ya ule' ebe o kwuru na mpụ na nrụrụaka ka dị na Naịjirịa n'agbanyeghị nkwa Buhari kwere ị kwụsị ya.
Image Copyright @OlisaOsega @OlisaOsega
Ibuso ụbịam agha/akụnaụba: Buhari kwuru na o kewapụtara 'Social Investment Programmes (SIP)' iji mee ka ndị obodo si n'ụbịam pụta ma banye n'ikewapụta ọrụ, itinye ego n'ahịa nakwa ikwado onwe ha. Mbunuuche e ji kewapụta SIP bụ ịnyeghachị ndị mmadụ etu ha si akpata ego, ohere ịkpata akụ na ụba nakwa ime ka nri gazuo ndị ogbenye na gburugburu Naịjirịa.
Image Copyright @AdeBanqie @AdeBanqie
Inye ọkụ latrik: N'ihe gbasara inye ọkụ latrik, Buhari kwuru na "ndị Naịjirịa si na gburugburu mba a na-agbasa ozi ọma maka na ọkụ na-enwu karịa etu ọ dị na mbụ nke mere ka ojiji igwe na-enye ọkụ daa".
Nke a akwụsịghị ndị mmadụ ikwu ihe ha na ọkụ na-aga n'ulọ ha.
Ha kwuru na enweghị ọkụ latrik ekweghị ha lee okwu Buhari.
Image Copyright @d_problemsolver @d_problemsolver
Image Copyright @SweetShantel @SweetShantel
#Nottooyoungtorun bill: Buhari kwuru sị "N'ime mkpụrụ ụbọchị ole na-abịa, ọtụtụ ndị ntorobịa ma ihe ha na-arụ ga-esonye m oge m ga-ebinye aka n'akwụkwọ ga-eme ka "Not Too Young to Run" bụrụ iwu."
Image Copyright @IbrhmFaruk @IbrhmFaruk
Onye ọzọ jụrụ ebe ndị ntorobịa ga-esi nweta ego ha ga-eji azọ ndọrọndọrọ ọchịchị.
Image Copyright @Karovoni @Karovoni